Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova
N’ABALỊ isii n’ọnwa Ọktoba afọ 2014, a malitere Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova n’asụsụ Bekee. * Kemgbe ọnwa Ọgọst afọ 2015, a sụgharịala ihe omume a nke na-eme ka okwukwe anyị sie ike n’ihe karịrị asụsụ iri asaa ka o nwee ike ịbara ọtụtụ ụmụnna anyị uru. Ọtụtụ ndị lerela ya ezitela ozi ekele maka ya. Ma, olee ihe ndị e megasịrị tupu Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova enwee isi?
E kwesịrị ịchọta ebe dị mma a ga na-anọ eme ya. A chọtara ebe dị mma n’isi ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị́ na 30 Columbia Heights, Bruklin, Niu Yọk. Naanị n’ime otu izu, a kwapụrụ ihe ndị dị n’ebe ahụ a chọtara. Ngalaba Na-ahụ Maka Ịrụzi Ihe malitere idozi ebe ahụ ka e nwee ike ịnọ na ya na-eme ihe omume tiivi anyị. Ndị na-etinye ihe ndị a ga-eji na-ese vidio malitere tinyewe ihe ọgbara ọhụrụ a ga-eji na-ese vidio, tinyekwa ha otú ga-adị mma n’anya. Ọtụtụ ụmụnna anyị ndị si n’ebe dị iche iche n’Amerịka rụrụ ọrụ si n’ụtụtụ ruo n’abalị ebe ha na-ese ma na-ahazi otú a ga-esi dozie ebe ahụ ọsọ ọsọ. E ji ụbọchị ole na ole mee nchọpụta na-ewe ọtụtụ ọnwa ime. Ngalaba Ịzụta Ihe bidokwara tụwa ọda ọtụtụ ihe a ga-eji arụ ọrụ ebe ahụ.
Waya niile e ji rụọ ọrụ ebe ahụ ruru ọtụtụ kilomita n’ogologo. Ndị tinyere ha hụkwara na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. N’oge ha na-etinye waya ndị ahụ, ụmụnna anyị, bụ́ ndị na-esi ná mba dị iche iche abịa abụrụ anyị abụ, nọ n’ebe anyị na-emepụta vidio na ihe ndị a na-egere egere na Patasịn, na-etinye abụ a ga na-akpọ n’ihe omume tiivi anyị n’ígwè. A maliteziri ịkwado ihe a ga-eme n’ihe omume tiivi anyị mbụ. E dere ihe ndị ahụ, ndị ga-eme ha amụgharịakwa ha. Ụmụnna na-arụ ọrụ na ngalaba na-ahụ maka vidio na ihe ndị a na-egere egere na Bruklin, Patasịn, Wọlkil, nakwa ná mba ndị ọzọ rụsiri ọrụ ike ịhụ na e tinyere ihe ndị ahụ n’ígwè. Mgbe e dozichara ebe a ga-anọ na-eme ihe omume tiivi anyị, tinyekwa ya ihe ndị e kwesịrị itinye na ya, a malitere ịkwadebe ihe ndị a ga-eme n’ime ọnwa ole na ole.
Ihe a bụ ụlọ ọrụ Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova. Ọ dị na Bruklin Niu Yọk
Mgbe a jụrụ onye bụ́ aka ochie n’imepụta vidio oge ọ ga-ewe iji dozie ebe hà ka ebe ahụ anyị ga na-anọ eme ihe omume tiivi anyị, ọ sịrị na ọ ga-ewe otu afọ na ọnwa isii. Ma o were ụmụnna anyị naanị ọnwa abụọ n’ihi na ha rụsiri ọrụ ike.
Uru ihe omume tiivi anyị a barala abụghị ihe e ji ọnụ ekwu. A na-etinyekarị ihe omume tiivi nke ọnwa ọ bụla na Mọnde mbụ n’ọnwa. Ugboro ole a na-ele ihe omume tiivi nke ọnwa ọ bụla n’ọnwa ahụ e tinyere ya karịrị nde abụọ. A gụkọta ugboro ole a na-ele ihe omume tiivi anyị nke ọnwa ọ bụla na vidio ndị ọzọ n’ọnwa, ọ karịrị nde iri.
“Ikiri Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova mere ka m nọrọkwuo nzukọ Jehova na Òtù Na-achị Isi nso. M ma na nzukọ a m nọ bụ nzukọ ndị nọ na ya hụrụ ibe ha n’anya nke ukwuu.”—Kenya
Olee otú obi dị ụmụnna anyị maka ihe a e ji akụziri ha gbasara Chineke? Ihe ị na-aga ịgụ ugbu a bụ naanị ihe ole na ole n’ime ọtụtụ ihe ụmụnna anyị kwurula banyere ihe omume tiivi a:
“Abalị taa bụ otu n’ime abalị ndị m kacha nwee obi ụtọ ná ndụ m. Mgbe mụ na nwunye m lechara ihe omume tiivi anyị nke ọnwa Mee afọ 2015, obi ụtọ m nwere abụghị ihe e ji ọnụ ekwu. Ihe a bụ otu n’ime onyinye kachanụ Jehova nyetụrụla m. Anyị na-ekele Òtù Na-achị Isi na ụmụnna anyị niile gbasiri mbọ ike iji hụ na ihe omume a magburu onwe ya, nke na-eme ka okwukwe anyị sikwuo ike, ruru anyị aka.”—Indoneshia.
“Ọ bụ na nso nso a ka ọtụtụ ụmụnna anyị na-anụ okwu onye so n’Òtù Na-achị Isi kwuru. Ugbu a, ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịnụ okwu ha, anyị nwekwara ike ịhụ ha. Ihe omume tiivi a emeela ka anyị na Òtù Na-achị Isi na ụmụnna anyị nọ n’ụwa niile dịrịkwuo n’otu.”—Kenya.
“Ọ na-esiri mụ na ụmụ m abụọ na-eto eto ike ịna-enwe ofufe ezinụlọ n’ihi na di m abụghị Onyeàmà Jehova. Ọ bụ ya mere ihe omume tiivi anyị ji baara m ezigbo uru. Ha na-eme ka m mara na m so na nzukọ Jehova, ha na-agbakwa mụ na ụmụ m ezigbo ume. Nke a bụ ngọzi si n’aka Jehova.”—Briten.
“Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova na-atọgbu anyị atọgbu. Jehova zara anyị ekpere mgbe e bidoro ịna-asụgharị ya n’asụsụ ndị ọzọ. Ihe kacha agba anyị ume bụ otú unu si eji obi ụtọ eme ihe gbasara ofufe Jehova. Kemgbe e bidoro ime ihe omume tiivi anyị, anyị anọrọkwuola nzukọ Jehova magburu onwe ya nso.”—Chek Ripọblik.
“Ịnụ ka ndị so n’Òtù Na-achị Isi na-ekwu okwu n’asụsụ m emeela ka mụ na Jehova dịrịkwuo ná mma.”—Brazil.
“Ihe a bụ afọ iri na isii m fewere Jehova, ma obi ụtọ m nwere taa pụrụ nnọọ iche. Ọ dị ka obi ụtọ m nwere mgbe e mere m baptizim. Unu emeela ụmụnna m ndị m hụrụ n’anya maka Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova.”—Brazil.
Obi siri anyị ike na site n’enyemaka Jehova, Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova ga-anọgide na-enyere ụmụnna anyị n’ụwa niile aka ịnọgide na-efe Jehova, meekwa ka a na-etokwu ya.
^ para. 1 Ị chọọ inweta Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova, dee tv.jw.org n’ebe a na-achọ ihe n’Ịntanet.
mailto:?body=“Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova Na-atọgbu Anyị Atọgbu”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302016046%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova Na-atọgbu Anyị Atọgbu”